Moments leh saaxiibo 62
Xuquuqda, 1916, by HW PERCIVAL.
Maxaa badanaa loola jeedaa ereyga "Soul" iyo sidee loo isticmaalaa erayga Soul?
Ereygan waxaa loo isticmaalaa habab badan oo kala duwan. Kuwa isticmaala waxay leeyihiin sharciyo qeexan oo ku saabsan waxa ay doonayaan inay ku tilmaamaan. Dhamaantood waxay maanka ku hayaan in ay tahay wax aan ahayn wax; in ay tahay wax aan ahayn arin guud ahaaneed. Dheeraad ah, ereyga waxaa loo adeegsadaa si aan kala sooc lahayn, sida waa dabiiciga ah halka ay jiraan heerar badan oo ka mid ah horumarinta arimaha, iyo nidaamka aan la aqbali karin si loogu qoondeeyo heerarkaas. Markaasaa Masriyiintii ka hadleen toddoba qof. Plato oo ah nafta saddex geesoodka ah; Masiixiyiintu waxay ka hadlaan nafta sida wax ka duwan ruux iyo jidh jidh ahaaneed. Falsafadda Hindu waxay ka hadlaysaa noocyo kala duwan oo nafeed ah, laakiin way adag tahay in lagu tiriyo qoraallada hoos u dhigaya nidaamka. Qaar ka mid ah qorayaasha qaniisiinta ah waxay kala saaraan sadexda ruux - ruuxi rabbaani ah (buddhi), nafta bini'aadamka (manas), iyo nafta, nafta xayawaanka. Qorayaasha qadiimiga ah ma aqbalaan waxa ereyga nafta loo isticmaalo. Sidaa daraadeed ma jirto wax caddaalad ah, kama dambeys ah, marka laga reebo in ereyga nafisku ku daboolo qoraallada aosaasiga ah ee dhinacyada kala duwan ee muuqaalka aan muuqan. Sidaa darteed, suurtagal maaha in la yiraahdo waxa badanaa la macno yahay nuxurka nafsadda.
Sheeko caan ah sida "jecel yahay wadnaha iyo nafta," "waxaan naftayda siinayaa", "naftayda u fur", "iid ah nafta iyo socodka sababtoo ah," indhaha nafta, "" xayawaanka nafaha "," nafaha kuwa dhintay, "ku dar jahwareerka.
Waxay u muuqataa in mabda 'caadiga ah uu yahay nafta oo macnaheedu yahay wax aan la arki karin oo aan la garan karin, oo sidaas darteed maaha arimaha adduunka, iyo in qoraagu uu isticmaalo ereyga si uu u daboolo qaybtan ama qeybaha aan la arki karin sida uu dareemayo farxad.
Kuwa soo socda ayaa la siiyaa qaar ka mid ah aragtida sida loo isticmaalo nuxurka ereyga loo isticmaalo.
Maaddada marxalad kasta oo la soo saaro, walaxda ayaa neefta ka soo baxda. Marka maaddadu ay neefta ka baxdo, waxay u neefsataa sida ururada; taas oo ah, hay'ado madaxbannaan, cutub shaqsi. Qayb kasta oo shakhsi ah ayaa leh kartida, inkastoo aysan suurtogal aheyn suurtagalnimada, inay noqdaan kuwa ugu weyn ee la qoondeeyey. Qayb kasta oo shakhsi ah marka neefta la saaro ayaa leh laba dhinac, taas oo ah hal dhinac oo isbeddelaya, kan kale oo is beddelaya. Dhinaca isbedelaya waa qeybta muuqata, isbeddelka waa qaybta aan la aqoonsan ama walaxda. Qaybta muuqata waa ruux iyo naf, xoog iyo arrin.
Labadan ruux ee ruuxa iyo nafta waxaa laga helaa dhamaan isbeddellada isbeddelka ee isbarbardhigaya midba midka kale.
Cutubka shakhsi ahaaneed wuxuu isu geynayaa cutubyo kale oo shaqsi ah, waligiisna lumiyo shakhsiyadeeda, inkastoo aysan lahayn aqoonsi bilowga.
Marka la eego marxaladaha ugu horreeya ee maskaxiyan ah ee marxaladaha dambe ee xarriiqda, taas oo ah, arrin jireed, ruuxu wuxuu si tartiib tartiib ah u lumiyaa xuduudkeeda, iyo arrimuhu waxay kor u qaadaan heerarka isku midka ah. Ereyga xoogga waxaa loo adeegsadaa meeshii uu ruuxu ku habboonyahay, taas oo ay ku haboon tahay, halka arrin loo adeegsanayo meel nafeed ah.
Qofka isticmaala ereyga waa inuusan u maleyneynin inuu u dhiibay nuxurka ereyga iyo inuu ogyahay waxa weeye. Xaqiiqda dhabta ah, waxaa laga yaabaa in uu ogaado sida wax yar oo ay tahay sida uu ogyahay nafta qofka. Waxa uu ogyahay muuqaalka sifooyinka qaarkood iyo sifooyinka qaarkood, laakiin sida arrintu u tahay, dhinac ka mid ah, ma garanayo, ugu yaraan maaha ilaa inta fikradaha xasaasiga ah ay yihiin kanaalka iyada oo macluumaadka u gaaro isaga.
Ruuxa iyo maskaxda iyo maskaxdu waa in aan loo isticmaalin isbeddel sida isku midka ah. Dunida waxaa jira toddobo farabadan ama afar jaad ah oo nafood ah. Toddobada amar ee nafoodkoodu waa labo nooc: jimicsi iyo jimicsi, kacdoon iyo kacsanaan. Naftii soo degtay ayaa niyad-jab leh, ku dhiirrigeliyay, dhiirigeliyay inay ku dhaqaaqaan ruux. Naftii kor u kacday waa, ama haddii aanay ahayn, waa inay noqdaan, oo kor u qaadaan oo ay hoggaamiyaan maskaxda. Afar ka mid ah toddobada amarradoodu waa dabeecadaha dabiiciga ah, amar kastaa oo leh heerar badan oo adduunka ah oo ay ka mid tahay. Ruuxu wuxuu maskaxda ku hayaa nafta oo soo jiidanaya jihada ka soo horjeeda maskax ahaaneed ee la taaban karo iyada oo la adeegsanayo noocyo kala duwan oo nolosha ah iyo qaababka iyo wejiyada dabiiciga ah, illaa uu ka soo baxo ama la keeno qaab jidheed. Ruuxa ama dabeecadda ayaa maskaxda ku haya inta uu ku jiro, laakiin waa in maskaxda lagu sara kiciyo nafta jihada ah ee jidka koritaanka, iyada oo loo marayo darajooyinka kala duwan ee mid kasta oo ka mid ah saddexda amar ee ka timaada aadanaha aadanaha ilaa dhimashada Ilaah . Naftu waa muujinta, nuxurka iyo hal-abuurka ruuxa, iyo nolosha iyo maskaxda.
Si loo kala saaro toddobada xajiyadood, waxaa laga yaabaa in aan wacno naqshadaha nafsiyaadka naftooda, naftooda, naftooda, jinsiga; iyo amarro kor u qaadaya xayawaannada nafaha, nafta bini-aadanka ah, iyo kuwa aan dhiman. Qodobka afaraad, ama amarka jinsiga, ha la fahmo in nafta uusan jinsi ahayn. Jinsi waa dabeecad jidheed, kaas oo dhammaan nafta oo dhan waa in la qabadsiiyaa ka hor inta aan lagu kicin karin habka maskaxda ee maskaxda. Mid kasta oo ka mid ah amarrada ayaa dareen cusub ku abuuraya nafta.
Afarta amar ee dabeecadda dabiiciga ah maaha oo aan noqon karin mid aan dhimanayn iyada oo aan maskaxda ka caawin. Waxay u eg yihiin neef ama nolol ama qaabab muddo dheer, ka dibna waxay ku jiraan jirdhiska jirka muddo dheer. Muddo ka dib waxay joojiyaan jiritaanka jirro jirka ah waana in ay maraan marxalad isbedel ah oo dhimasho ah. Kadib marka laga soo bilaabo isbeddelka waxaa soo baxaya hannaan cusub, oo cusub, oo ah waxbarashada ama khibradda ku jirta amarkaas.
Marka maskaxdu isku xirto nafta si ay kor ugu qaaddo, maskaxdu ma guuleysan karto marka hore. Nafta xayawaanka waa mid aad u xoog badan maskaxda oo diidaya in la sara kiciyo. Sidaas daraaddeed way dhiman doontaa; waxay lumisaa qaabkeeda; laakiin ka soo jeeda asaasiga lagama maarmaanka ah ee aan lumi karin maanka ayaa ku dhawaaqaya qaab kale. Miyirku wuxuu ku guulaystaa inuu nafta ka qaado xayawaanka ilaa gobolka aadanaha. Noloshu waa inay doortaan haddii ay rabto inay ku soo noqoto xayawaanka ama ay ku sii socoto dhimashada. Waxay ku dhacdaa dhimashadeeda markay aqoonsato aqoonsigeeda iyo si madaxbannaan oo maskaxda ka caawisa. Dabadeedna wixii nafsad ahaan leh ayaa maskaxda ku jiraa, oo maskaxda kor u qaadaysa naftu inay maskaxdayda ka gudubto waxay ka gudubtaa afarta adduun ee muuqda oo aan loo dhigin, oo midna wuxuu noqonayaa mid la mid ah Ilaahnimadiisa. Waa maxay naftaas waxaa lagu soo koobay Tifaftiraha "Soul," February, 1906, Vol. II, WORD
Waxaa jira nafta ama nafta ku xiran qayb kasta oo ka mid ah arin ama dabeecad, muuqaal iyo muuqaal la'aan; iyada oo jidhka oo dhan, haddii jidhku yahay macdanta, qudaarta, xayawaanka ama dusha sare, ama urur siyaasadeed, warshadeed ama waxbarasho. Taasi waa isbeddelka jirka; taas oo aan isbeddelaynin, inta ay wadajir u qaadaneyso jirka isbeddelka ku xiran, waa nafta.
Ninkee rabaa in uu ogaado ma ahan wax badan oo ku saabsan tirada iyo noocyada nafsiyaadka; Wuxuu rabaa inuu ogaado waxa nafta bini'aadamku yahay. Nafta aadanaha ma aha maskaxda. Maskaxdu waa mid aan la dhiman. Nafta bini'aadanku maaha mid aan dhimanayn, inkastoo laga yaabo inay noqoto mid aan dhimanayn. Qeyb ka mid ah maskaxda ayaa isku xirta nafta bini'aadamka ama waxay ku dhacdaa jir bani-aadmi ah; oo tanina waxaa loogu yeeraa dhicis ama dib-u-dhac, inkastoo ereygu aanu sax ahayn. Haddii nafta qofku uusan diidin maskax badan oo maskaxda ku jirta, iyo haddii maskaxdu ku guulaysato ujeeddada ay uuraysatay, waxay kor u qaaddaa nafta bini'aadamka oo ka timaadda maskax nololeed ilaa xaalad aan dhimanayn. Ka dibna waxa uu ahaa nafta bani-aadanka ahi wuxuu noqonayaa maskax-maskax. Masiixiyadda, iyo gaar ahaan caqiidada nacaybka, waxaa lagu aasaasay xaqiiqadan.
Dareen gaar ah oo xaddidan ayaa ah nafta bini'aadamka waa qaab muuqaal ah oo aan la taaban karin, wraith ama jinni jirka jirka ah, kaas oo haya qaabka iyo qaababka isbeddelka jireed ee isbeddelka ah oo isdaba-joog ah isla markaana ilaalinaya iyaga. Laakiinse nafta ruux wuu ka sii sarraysiin doonaa. waa shakhsiyadda. Nafta bini'aadamka ama shakhsi ahaaneed waa wax cajiib ah, urur ballaaran, kaas oo isugu jira ujeedooyin qeexan, wakiillo ka kala socda dhammaan amarrada nafsiga. Shakhsiyaadka ama nafta bini'aadamku waxay wadajir u leeyihiin oo ay ka mid yihiin dareenka gudaha iyo kuwa dareenka ah iyo xubnahooda, waxayna xakameynayaan isla markaana waafaqsan yihiin shaqadooda jireed iyo maskaxeed, waxayna ilaaliyaan waaya-aragnimada iyo xasuusta muddada jiritaanka. Laakiin haddii nafta bani-aadka ah ee aan laga soo sara kicin jirkeeda bini-aadanka ah-haddaanay maskaxdu noqonin-markaas naftiisu ama shakhsiyadu way dhimanayaan. Kor u qaadidda nafta oo maskaxda ku jirta waa in la sameeyaa ka hor dhimashada. Tani waxay noqon kartaa maskax micnaheedu waa in qofku uu yahay mid miyir-beel ah oo madaxbanaan oo ka baxsan jirka jirka iyo dareenka gudaha iyo kan gudaha. Dhimashada shakhsiyadda ama nafta bini'aadamka ayaa nafsad ahaaneed soo saaraa naqshadeynta. Waxay ku noqdaan amarradooda u gaarka ah ee dadka naftooda ku soo degaya, inay mar kale soo galaan isku-dhafka nafta bini'aadamka. Marka nafta bini'aadanku dhinto maahan dariiqo aan badana lumin. Waxaa jira in taas oo aan ku dhimanayn marka jirkiisa jirka iyo foomka ghostly la burburiyo. Taas oo ah nafta aadanaha ee aan dhimanayn waa jeermiska aan la arki karin, jeermiska shakhsi ahaaneed, kaas oo loogu yeero shakhsi cusub ama nafta bini'aadamka iyo agagaarka dhismaha cusub jirka ah. Taas oo micneheedu yahay jeermiska shakhsi ahaaneed ama nafta waa maskaxda, marka maskaxdaasi ay diyaar u tahay ama diyaarinayso inay soo jiidato. Dib-u-dhiska shakhsiga ah ee nafta bini'aadamku waa aasaaska oo lagu aasaasay caqiidada sarakicista.
Si aad u ogaato dhammaan noocyada nafsiyaadka waxay u baahan yihiin falanqayn iyo aqoon guud oo cilmiga sayniska ah, oo ay ka mid yihiin kiimikada, baayolojiga iyo cilmi-nafsiga. Kadibna waxaa lagama maarmaan ah in laga tago baqdinta aan jecelnahay inoogu yeedho metaphysics. Waqtigaas waa in uu u istaago nidaamka fekerka sida saxda ah iyo sida ku tiirsan sida xisaabta. Iyadoo la adeegsanayo nidaam noocan oo kale ah iyo xaqiiqooyinka sayniska, markaa waxaanu yeelanay cilmi nafsi dhab ah, sayniska nafta. Marka nin doonayo in uu helo.